AFRIKTURK IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY waxaa lagu aasaasay hadaf ah inuu noqdo lamaane lagu kalsoonaan karo ee ganacsiga caalamiga ah. Waxaan nahay khubaro xirfadlayaal ah oo wax kala soo degaya kana soo dhoofinaya faylalka ganacsi ee kaladuwan ee ka badan 15 sano koritaanka degdegga ah, keenista iyo dhoofinta badeecadaha kala duwan ee adduunka oo dhan, AFRIKTURK waxay bixisaa adeegyo iyo dhoofinta lagu kalsoonaan karo oo dhammaan dhinacyada saadka si loo buuxiyo heerarka caalamiga ah.
AFRIKTURK waxay bixisaa adeeg u gaar ah, adeegsi ku saleysan baahiyahaaga gaarka ah. Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa soosaarayaasha, iyo qeybiyeyaasha si aan u siino alaabo badan oo noo sahlaya inaan qaabeyno adeegyadayada si aan ula kulanno baahida macaamiisheena.
Waxaan abuurnay iskaashi aan la yeelanay xirfadlayaal khibrad u leh dhinacyadooda si loo bixiyo tayada ugu sareysa ee alaabada, loo hubiyo keenista waqtiga iyo ilaalinta macaamiisha.
Waxaan leenahay khibrad iyo aqoon iyo sidoo kale xiriir ballaaran oo xiriir ganacsi oo lala yeesho shirkado iyo warshado badan oo ku yaal Turkiga iyo Shiinaha. Waxaan sidoo kale joognaa inta badan wadamada Bariga Afrika oo ay ku jiraan Jabuuti, Soomaaliya, Somaliland, Itoobiya, Kenya, iyo Tansaaniya.
+252 634 401 418
HOME HOME SERVİCES PARTNERS CONTACT
Xuquuqda daabacaadu way xifdisan © 2020